Manchester City ayaa ku guuleysatay xukunkii maxkamada xalinta khilaafaadka Isbortiga… – Hagaag.com
Posted on 13 Luulyo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Maxkamadda Xalinta Khilaafaadka Isboortiga oo fadhigeedu yahay Lausanne, ayaa ku dhawaaqday maanta oo Isniin ah in ay baabi’isay ciqaabtii ka hor istaageysay Manchester City inay ka qeybgasho tartamada Yurub muddo labo sano ah.
Go’aanka ayaa la macno ah in kooxda tababare Pep Guardiola ay awoodi doonaan inay ka qeybqaataan Champions League xilli ciyaareedka soo socda, isla markaana ay ka badbaadi doonaan burburka suurtagalka ah ee kooxda haddii xiddiguhu ka dareeraan natiijada ciqaabtaan darteed.
Manchester City ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala sarreynta Premier League oo Liverpool hanatay horyaalka ka hor dhamaadka xilli ciyaareedkaan, ka saarideeda tartamada Yurub ayaa waxay u ogolaaneysa labo koox inay ka qeyb galaan, halka kooxda shanaad ee Champions League ay u soo bixi laheyd Premier League bedelkii.
Manchester United ayaa haatan ku jirta kaalinta shanaad iyadoo leh 58 dhibcood, laakiin waxaa loo arkaa inay tahay musharrax u sii gudbaya booska saddexaad bedelkii Chelsea oo leh (60 dhibcood) haddii maanta oo Isniin ah ay garaacaan kooxda Southampton dhamaadka wareega 35aad, halka Chelsea ay u dhici doonto kaalinta afaraad, waxaa ku xigta Leicester oo shanaad ah.
Ka saarida Man City ee Champions League ayaa u fududayn laheyd shaqada Tottenham ee u soo bixitaanka koobka Europa League, iyadoo ku jirta booska 8aad iyadoo leh 52 dhibcood halka Arsenal iyo Burnley oo min 50 dhibcood leh.
Maxakamada ayaa xukuntay in naadiga Ingriiska aysan ku xadgudbin qawaaniinta ciyaar wanaaga, waxeyna sidoo kale hoos u dhigtay ganaax lacageed oo looga dhigay City 10 million euro (11 million iyo 300 kun dollar) halkii ay ka aheyd 30 million euro (33 million iyo 950 kun dollar) sababtoo ah iyagoo aan Iskaashi la sameyn (UEFA).
Ka Maqnaanshaha Champions League ayaa City oo beenisay inay wax qalad ah sameysay ugu kici lahaa khasaare gaaraya ilaa 100 milyan ginni ($ 125 milyan), oo u dhaxeysa lacag abaalmarin ah, xuquuqda war baahinta, tikidhada ciyaarta iyo dakhliyada kale.
Xeerarka ciyaarta maaliyadeed ee nadiifka ayaa waxay ujeeddadoodu tahay in la helo isu-dheellitir ka dhexeeya kharashka naaddiga iyo dakhliga, sidaas darteedna aan loo oggolayn khasaare weyn ee soo gaara naadiyada sababo la xiriira kharash-gareeynta aan xadka laheyn ee lagu bixinayo ciyaartoyda.